3 emulators emahara eGnu / linux | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva ese kune mimwe mitambo yemavhidhiyo inoenderana kana inoshanda paGnu / Linux, chimwe chinhu chisingafungidzike makore gumi apfuura. Ichi chinhu chakanaka, asi panogara paine mumwe mutambo uyo unowanikwa chete kune mamwe asiri maGnu / Linux mapuratifomu.
Kugadzirisa dambudziko iri pane emulators, zvirongwa zvinodzokorora chikuva chiri mubvunzo kuitira kuti mutambo ugone kushanda. Uye aya emulators mukuwedzera pakusununguka vamwe, tinogona zvakare kuisa pane chero Gnu / Linux kugovera. Tevere isu tichataura nezvayo 3 emulators emahara atinogona kuisa pane chero Gnu / Linux kugovera.
Desmume ndeye emulator yeNintendo DS mitambo. Iyo inotakurika mutambo koni iyo inoshanda necartridge mitambo. Kunyangwe zvisingakwanise kuiswa pakombuta yedu, tinogona kushandisa backup makopi uye navo tinotamba mazita anozivikanwa senge SuperMario, Dr. Brain kana Pokémon paGnu / Linux.
Mazita ekuremekedza atakakura nawo akawanda uye akatinakidza kwemaawa mazhinji. Senguva dzose, emulator iyi iri mukati iyo yepamutemo marekodhi ezvizhinji zvakakurumbira zvekugovera, asi kana tisingakwanise kuiwana, tinogona kuendesa emulator iyo yepamutemo webhusaiti yepurojekiti.
PPSSPP ndeye emuchinjikwa-chikuva emulator iyo isingashande chete yeWindows kana Android asi inoshandawo paGnu / Linux. Iyi emulator inotibvumidza dzosa zvekare mitambo yePSP, Sony inotakurika mutambo mutambo.
Sezvo naDeSmuMe, iyo PPSSPP inoda makopi ekuchengetedza emitambo kuti ikwanise kutamba sezvo madhisiki ePSP asingatsigire zviteshi input kubva kune chero komputa. Iyo PPSSPP emulator iri mune mamwe emahofisi epamutemo asi kana tisina, tinogona kugara tichiiwana mahara pa iyo yepamutemo webhusaiti yepurojekiti.
Mukukosha, RetroArcho haisi emulator asi panzvimbo kumberi kweanoverengeka emulators, asi nekuisa iyi package tinoisa akati wandei emulators mahara. Saka, ne RetroArch tinogona kuisa chero emulator yechero yekare mutambo koni uye tinongoda vhidhiyo mutambo backup. Ini ndichangobva kuwana pasuru iyi kana kumberi uye zvinoita kwandiri inonakidza kune avo vasingade kuve vachitsvaga vachitsvaga emahara emulators anoshanda.
Aya matatu emulators emahara atinogona kuwana mune yakawanda yekuparadzaniswa kweGnu / Linux. Kunyangwe kana tichifanira kusarudza emulator imwe chete, Ini pachangu ndaizonamira neRetroArch nekuda kwekugona kwayo kuisa chero imwe emulator pasina chikonzero chekutakura chitoro chekuparadzira chekushandisa kana iyo console terminal Chinhu chinonakidza kwete zvakadaro nyanzvi vashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » 3 emulators emahara eGnu / linux
Mhoro Joaquin. Chinyorwa chakanaka chinodzidzisa, kunyangwe dzidziso yemashandisirwo erudzi urwu rwevamiririri yaisazove yakaipa uye kunyangwe iwe zviripachena haugone kutaura kwaunga dhawunirodha iyo mitambo nekuti haisi software yemahara, zvaisazove zvakaipa kutaura kuti ndeapi mafomati avanofanira kuve nawo, nezvimwewo, nezvimwewo. Zvakanaka ini ndiri purofiti, ini ndatoziva, asi nekukumbira kuti igare. Ini ndinobvumirana newe mumakore gumi ehurumende neLinux murudo rwangu kunyanya yapfuura Ubuntu iyo yaigona kungondiita kuti ndikanganwe kugoverwa kwangu kwazvino, iyo yekare Debian. Kungo kwazisa (nenzira yatino bvumiranawo murudo rweNhoroondo neNew Technologies)
Ndinoda kuwedzera emulators maviri asina kutaurwa uye anonakidza kuteedzera akati wandei michina senge:
Dolphin Emu: Emulator yeNintendo GameCube uye Nintendo Wii
sudo apt-wedzera-repository ppa: dolphin-emu / ppa
sudo apt kugadzirisa && sudo apt kuisa dolphin-emu
apt kuisa mednafen
Neo Geo Pocket (Ruvara)
Nintendo Varaidzo Sisitimu
Super Nintendo Varaidzo Sisitimu / Super Famicom
PC Injini / TurboGrafx 16 (CD)
Sega mutambo giya
Sega Genesi / Megadrive
Sega Saturn (kuyedza, x86_64 chete)